Badube irenki bekhala ngokungcola | News24
Badube irenki bekhala ngokungcola
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaKungesikhathi amatekisi evale umgwaqo uPietermaritz ngoLwesine olwedlule.
“SIKHATHELE ukulunywa omasikito erenki ngenxa yokungcola.”
Lawa ngamazwi abashayeli bamatekisi ama eMgodini nabathi sebekhathele ukusebenzela endaweni engcolile nenukayo.
Labashayeli bavale umgwaqo uPietermaritz ngamatekisi ngoLwesine olwedlule nalapho kade befuna khona iMeya kaMasipala uMsunduzi ukuba izolalela izinkinga zabo bese kuhlanzwa nendawo lapho besebenzela khona.
Abashayeli abahambela ezindaweni eziningi ezahlukene bafunge bagomela bathi angeke baze babuyele ukuyosebenzela kule renke ingakahlanzwa ngendlela efanele.
Ngaphandle kokungcola nokuncinzwa omasikoto baphinde bakhala ngokungabi khona kukanogada ozogada ukuthi akugcini yini kugcwala abantu abangadingeki nabasuke bezoganga babheme nezidakamizwa khona kuleli renki.
Omunye wabashayeli uMnu Sfiso Ntshangase uthe okubuhlungu ukuthi lokhu kungcola kugcine sekubaqatha nabagibeli kube sengathi ibona abaletha ukungcola erenki.
“Uthi uhamba ulayishe umphakathi uyodelelwa okanye uchwenswe ngokungcola kwerenke uze uyofika lapho uya khona. Kwesinye isikhathi sigcina sesikhuluma kabi nabagibeli ngoba sidinwa izinto abazikhulumayo nabenza sengathi ithina esingcolisayo noma esithi alingahlanzwa,” kubeka yena.
UMnu Hlanganani Mncwabe nohambela endaweni yaseMthatha uthe: “Uthi ufika lapho uya khona inhliziyo isuke ingasekho ngoba abantu beloku bekungcofa ngokungcola kwerenke.”
Laba bashayeli baphinde baveza ukuthi ngisho izindlu zangasese zakule renki zingcolile kanti futhi kunabantu abafika bezobhemela khona ngoba akekho unogada oziqaphile nokwenza kube lula ukuthi abantu bazenzele umathanda.
Baveze ukuthi kunesikhathi lapho lezindlu zangasese zike zavalwa izinyanga ezine zingasebenzi kodwa bengazi ukuthi zivalelweni nokuthi kungani zingasebenzi.
Imeya yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo uvakashele kule ndawo ngoLwesine nalapho efike wazibonela yena isimo esikhona ngaphakathi erenki.
Ekhuluma ne-Echo uMnu Njilo uthe bengumasipala bazosiza ukuthi bahlanze le ndawo ngokuthi bafuthe ukuze kuzophela omasikito kanye nephunga elibi.
“Singenile nathi impela ngaphakathi erenke isimo sakhona asigwinyisi mathe neze. Siphinde sathola ukuthi kunezindlu ezikhona ngaphakathi erenke ezingavulwa umuntu kodwa ezivulwa abantu abathize kuphela. Lezo zindlu nazo sizoqeda ngazo ngoba asazi ukuthi kungani zingavulwa.
“Ngesikhathi kuhlanzwa le ndawo amakhumbi wona sizowazamela enye indawo azoma kuyona ngesikhathi kusahlanzwa le ndawo,” kubeka yena.
Nakuba imeya yathembisa ngoLwesibili ukuthi le ndawo izohlanzwa ngoLwesihlanu abashayeli bamatekisi bebesatelekile bevale nomgwaqo uBoshoff nokuyinkomba yokuthi irenke yabo ibingakahlanzwa.
Amatekisi abesema. ngaphandle.